Donation Archives - VPS - Shweman Online Media
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟာ ကိုဗစ် ကာ ကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ လှူသလိုမရှိတဲ့သူတွေကိုလည်း စားနပ်ရိက္ခာတွေ မကြာခဏလှူဒါန်းနေပါတယ်။ ဒါတွေကိုလည်း ဒကာဒကာမတွေ မြင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ခုလည်းပဲ ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာကိုဗ စ်19ရောဂါတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက် ကုဋေ တစ်ရာ ကုသိုလ်အလှူတော်ကို လှူဒါန်းလိုက်ပြန်ပါတယ်…အားလုံးပဲအားပါးတရ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ။( နတ်လူ၊သာဓုခေါ်နိုင်ပါစေဘုရား ) အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သော နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကျောင်းဆရာမအလုပ်ကိုထွက်ပြီး ဘိုးဘွားတွေအတွက် ခိုလုံရာဂေဟာထောင်ပြီး ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ ဆရာမလေး
သူမကတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သာတမြို့ အင်္ဂပိုလမ်းမကြီးဘေး သီလှကုန်းမှာနေတယ် သူမနေပုံထိုင်ပုံက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးရယ် သူမကျောင်းပြီးတော့ ကျောင်းဆရာမအလုပ်ဝင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီနောက်သူမရဲ့ ခံယူချက်အရ အလုပ်ကထွက်ပြီး ခိုလူံရာဂေဟာကို ဟင်္သာတမြို့ လယ်တီကွင်းရပ် အောင်ချမ်းသာဘုန်းကြီးကျောင်းနားမှာ တည်ဆောက်ပြီး ဝန်ထမ်းများခန့်ပြီး ပြုစုစောက်ရှောက်သူတွေမဲ့သွားတဲ့ သက်ကြီးအဘိုးအဘွားတွေကို ခိုလူံရာဂေဟာမှာ ခေါ်ထားတယ်။အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ သတင်းကြားလျှင်လဲ သူမကိုယ်တိုင် လိုက်ပါပြီးသွားရောက်ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်တယ်။ သက်ကြီးဘိုးဘွားတွေတင်မကဘူး လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွေ၊ မိဘမဲ့စွန့်ပစ်ခလေးတွေ၊
YGW မိဘမဲ့ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းက ကလေးငယ် ၆၅၀ စာအတွက် လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်စွက်လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ မတည်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး
နိုင်ငံကျော် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ယုန်လေးကတော့ အနုပညာမှာ အောင်မြင်ရုံသာမက သူတစ်ပါးကို ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ထားကြောင့် လူချစ်လူခင်ပေါများသူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းရင်း နိဗ္ဗာန်ဆော် လုပ်လေ့ရှိတဲ့ ယုန်လေးက ဒီနေ့မှာလည်း ၈၉ မိုင်က YGW မိဘမဲ့ ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်းလေးမှာ လိုအပ်တာတွေ လှူဒါန်းနိုင်ဖုိ့ သူက (၃)သိန်း
ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ချင်းပြည်နယ်က ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာပရဟိတ ဂေဟာမှာ ရေစုကန်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် သိန်း ၃၀ လှူဒါန်း
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီနေ့မှာ အလှူလေး တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ ပရိတ်တွေ သာဓုခေါ်ဆိုလို့ရအောင် မျှဝေဖော်ပြ လာခဲ့ပါတယ်။ အလှူလေးကတော့ ချင်းပြည်နယ် ကန်ပက်လက်မြို့ ရင်သွေးငယ်များခိုလှုံရာ လူငယ်ဖွံဖြိုးရေးက ပရဟိတဂေဟာမှာ ရေစုကန် ဆောက်လုပ်ဖို့ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ဒီအလှူလေးကို
ခေတ် အဆက်ဆက် ဆင်း ရဲပေမယ့် အစိုးရ အထောက်အပံ့ ပထမ ဆုံးရဖူးတာပါ ဆို တဲ့ အဖိုး အို
ကိုဗစ် ကာလ နိုင်ငံတော်အစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးအပ်တဲ့ငွေ ၆သောင်းအားရရှိ အဘိုးအသက်က ၉၈ နှစ်ရှိပြီတဲ့ အဘိုးအရမ်းပျော်နေမှာပေါ့ အမေစုကို ဆုတွေတောင်းပေးနေတာလည်း မပီးတော့ဘူးဆိုပဲ အဘိုးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းထက် ၉နှစ်လောက်ပဲ ငယ်တယ် ခေတ်ပေါင်းစုံကို ဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့အဘိုးပါ အမေစု အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှ အခုလို ခံစားခွင့်မျိုး ရရှိတယ်ဆိုတာ အဘိုး သိနေမှာပေါ့ မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင် အိုးမင်းမစွမ်း
ပရိသတ်ကြီးရေ ကျောင်းကပွဲတစ်ခုကနေ တဆင့် အနုပညာလောကထဲရောက်လာပြီး ကြော်ငြာတွေရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆိုတာကို ပရိသတ်တွေသိပြီးဖြစ်မှာပါ ။ သူရရှိတဲ့အနုပညာကြေးနဲ့လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေအပြင် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ အနုပညာညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေကို ပါ မကျန် မကြာခဏလှူဒါန်းကုသိုလ်ယူတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ ဇွန်လ (၂၇) ရက်နေ့မှာတော့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဦးကောင်းကျော်က” ကြော်ငာမင်းသမီးလေး
ပနျးကနျဆေးတဲ့ ပိုကျအတိုပွတျလေးတှရေောငျးနရှောတဲ့ အဘှားအိုကို သနားလို့ ၂ခု ၃၀၀တနျကို ၅၀၀၀ပေးပွီးဝယျလိုကျတယျဆိုတဲ့ “ပိုပို”
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျော ပိုပို ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နရောတဈခုကို အခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျပါနျော။ ကိုယျပိုငျရေးသားထားတဲ့ တေးသီခငျြးတှကေို သီဆိုရငျး အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျမှုမြားစှာနဲ့လြှောကျလှမျးနတေဲ့ ပိုပိုက ပရိသတျခဈြမတ်ေတာကို ခံယူနတေဲ့ သူလညျးဖွဈပါတယျ။ ပိုပိုက သာယာခြိုမွတဲ့ အသံလေးနဲ့ အခဈြသီခငျြးတှကေို အမြားဆုံးသီဆိုလရှေိ့တာကွောငျ့ သူမရဲ့ သီခငျြးတှကေ လူငယျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားလူကွိုကျမြားနတောလညျးဖွဈပါတယျနျော…..။ လကျတလော ကိုဗဈကာလ
နဂါးရုံဘုရား ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောမြားကို လကျခ လုံးဝမယူဘဲ အခမဲ့လုပျပေးနတေဲ့ လူငယျလေးရဲ့ ဓာတျပုံမြား ( ၆ ပုံ )….
လေးစားလှနျးလို့ပါ…. ကိုငယျဆိုတဲ့ လူငယျဟာ နဂါးရုံဘုရား လကျခံတညျတိုငျး ဗုဒ်ဓရုပျပှားတျောအား လကျခ မယူပဲ လှူခဲ့တာ ၅ နှဈပွညျ့ခဲ့ပါပွီ ဘယျအရာမဆို အအတကျနိုငျဆုံး ကိုယျ့မှာ ရှိတဲ့ ပညာလေးနဲ့ ကွိုးစား အားစိုကျထားပါတယျ လို့ဆိုပါတယျ… သတငျးဓာတျပုံ ( ၁ ) သတငျးဓာတျပုံ ( ၂ ) သတငျးဓာတျပုံ
တေးသံရှငျမြိုးကွီးအတှကျ ရေးထားတဲ့သီခငျြးကရရှိသမြှအကြိုးမွတျတှကေိုလှူဒါနျးသှားမယျ့ လငျးလငျး
ပရိသတျအခဈြတျော ခတျေနဲ့သဈတို့ရဲ့ ဖဖေေ ဖွဈတဲ့ တေးသံရှငျလငျးလငျးကတော့ တေးရေး တေးဆိုအဖွဈ ပရိသတျတှအေားပေးခဈြခငျရတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ ။ သူရေးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ သီခငျြးတျောတျောမြားမြားကလညျး ပရိသတျတှကွေားမှာ ရပေနျးစားအောငျမွငျခဲ့ပါတယျ ။ လတျတလောမှာတော့ တေးသံရှငျလငျးလငျးက မြိုးကွီးအတှကျ ရေးဖွဈတဲ့ သီခငျြးတဈပုဒျမကွာခငျ တေးသံသာကနေ နားထောငျလို့ရမယျ့အကွောငျး ပရိသတျတှကေိုအသိပေးလာခဲ့ပါတယျ ။ မြိုးကွီးနဲ့ လငျးလငျးတို့နှဈယောကျဟာ ဒီသီခငျြးကနေ ရရှိမယျ့အကြိုးအမွတျအားလုံးကို
လေးကွိမျမွောကျ သိနျး ၁၀၀၀၀ ဆုရှငျမှ ရပျကှကျအတှငျးရှိ မိသားစု ၃၀၀ ကို လှူဒါနျးမှုကွီး ပွုလုပျ
လေးကွိမျမွောကျ သိနျး ၁ သောငျးဆုရှငျမှ ရပျကှကျအတှငျးရှိ မိသားစု ၃၀၀ ကို အခွခေံစားသောကျကုနျမြားလှူဒါနျး မကှေးတိုငျး၊ ပခုက်ကူမွို့နယျ ကမ်မမွို့မှ လေးကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ သိနျး ၁ သောငျးစုရှငျ ဒျေါဆဈပုမိသားစုမှ ၎င်းငျးတို့မိသားစုနထေိုငျရာ အမှတျ(၅) ရပျကှကျ အောငျဇယေလြမျးရှိ နအေိမျတှငျ အိမျထောငျစု ၃၀၀ တို့အား အခွခေံစားသောကျကုနျမြား လှူဒါနျးခဲ့ကွောငျး